"Education for Myanmar Youths": August 2007
ဒီပို့စ်ကတော့ ဘလောဂါ့တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်ခံစားချက်တွေပါ ။ ဒီပို့စ်ကို သူက ကျွန်မကိုပေးထားခဲ့တာကြာပါပြီ.. သူ့ ဘလောဂ့်မှာ တင်ဖို့အကြောင်းအရာမတိုက်ဆိုင် မတင်ဖြစ်တာနဲ့ ၊ ကျွန်မကပဲ ဒီမှာ တင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်... ။
မဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာ တွေထဲမှာ ပညာသင်ခြင်း ဆိုတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက ပညာရဲ့ အဆုံးအစ မရှိတဲ့သဘောကို မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာဟူသည် ဆုံးခန်းတိုင်သည်၊ ပြီးဆုံးသည်လို့ မရှိပဲ လေ့လာ ဆည်းပူးသလောက် ဆက်လက် တိုးတက်နေမဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ သံသရာ လည်နေတဲ့အဖြစ်၊ အစဉ်မပြတ်သေးတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောချင်တာပါ။ အဲဒီသံသရာက ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ သံသရာပါပဲ။ ဘ၀ဖြစ်တည်တဲ့ သံသရာက အဆုံးအစ မထင်ဘူးလို့ ဆိုကြပေမဲ့ အခုသံသရာကတော့ အစရှိပါတယ်။
ဘယ်ကစလဲဆိုတော့ မင်းတုန်းမင်းတရာကြီး လက်ထက် ကနောင်မင်းသား အိမ်ရှေ့စံဖြစ်ကတည်းကလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ စစ်မက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါ မြန်မာတွေ အရေးနိမ့်ရတဲ့ အဖြစ်ကို ကောင်းစွာသုံးသပ်မိတဲ့ ကနောင်မင်းသားကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို စက်မှုနိုင်ငံတော် အဖြစ်ထူထောင်ဖို့အတွက် စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လိုအပ်တဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်တွေ ရရှိဖို့အတွက် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ စက်မှု၊လက်မှု အတတ်ပညာတွေကို သင်ကြားဖို့ ပထမဆုံးသော ပညာတော်သင်များကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီက စတာပါပဲ။ ယနေ့ ပြောပြောနေတဲ့ brain drain တို့ brain gain တို့က အဲဒီအချိန်ကတည်းက စဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပညာတော်သင် လွှတ်လိုက်တဲ့ အထဲမှာ တချို့လည်း ပြည်တော်ကို ပြန်ရောက်သူရှိရဲ့၊ တချို့လည်း တပြည်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျပြီး မပြန်ဖြစ်တော့ပဲ အဲဒီနိုင်ငံများမှာပဲ အခြေချခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒီပို့စ်မှာတော့ ဦးနှောက်ယိုစီးမှု အကြောင်းကို ကျွန်တော် မဆွေးနွေးပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုလည်း တော်တော်များများက ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပညာသင်ဖို့ ထွက်နေလိုက်ကြတာ ကြာပြီပေါ့။ အခုချိန်အထိ အဆုံးမသတ် နိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘေးတွေ လက်ထက်ကလည်း ထွက်ရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အဖေအမေတွေ လက်ထက်ကလည်း ထွက်ရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်လည်း ထွက်ရတယ်။ ဟော… ကျွန်တော်တို့ သားမြေးမြစ်တွေ လက်ထက်မှာကော ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသွား သင်နေရအုံးမှာလား။ မျိုးဆက်တွေလည်း များခဲ့ပြီ။ ဒီသံသရာက မဆုံးနိုင်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာပဲ အဆင့်မြင့်ပညာတွေ သင်ကြားလို့ မရလို့လား။ မသင်ကြားပေးနိုင်လို့လား။ ပညာသင်ပြီး ပြန်လာတဲ့သူတွေက မိမိတို့သင်ထားတဲ့ ပညာတွေနဲ့ ထပ်မံတိုးပွားအောင်၊ ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်း မဖြန့်ဝေနိုင်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလူတွေကပဲ ညံ့နေလို့လား။ နောက်တစ်ချက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး သင်လာတဲ့ ပညာတွေက အသုံးမ၀င်လို့လား။ ခေတ်မမီတော့ လို့လား။ အခုခေတ်ပေါ် ပညာရပ်တွေ၊ နည်းပညာတွေကို မိမိတို့ ပြည်တွင်းမှာပဲ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာနဲ့ မသင်ကြားနိုင်ဘူးလား။ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ နောက်မျိုးဆက်တွေ ဘယ်တော့ရမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အရင့်အရင် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာဆည်းပူးလာကြတဲ့ သူတွေရှိရဲ့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဘာလို့ တိုင်းတပါးကို ထွက်နေကြရသေးတာလဲ။ ကမ္ဘာနဲ့အမှီ ရင်ဘောင်တန်း နေနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့မှာ လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစ မရှိကြလို့လား။ မေးခွန်းတွေ အများကြီးပါပဲ။ ပြဿနာတိုင်းမှာ ဖြေရှင်းစရာ နည်းလမ်းကတော့ ရှိရမှာပါ။
ဘယ်ပညာရပ် နယ်ပယ်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အားရစရာ ကောင်းတဲ့ ပညာရပ် နယ်ပယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အမြဲတမ်း နောက်ကျနေတာချည်းပါပဲ။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် မရှိရတာနဲ့၊ နည်းပညာနိမ့်ကျနေရတာနဲ့၊ စသည်ဖြင့် မရှိတာတွေချည်းပဲ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတယ်။ ဒါကတော့ ဒို့မြန်မာပြည်က ထွင်လိုက်တာလို့ ပြောစရာလည်း ဘာမှ မရှိဘူး။ တီထွင်မှုတွေကို မြင်ရဖို့ဝေးစွ ကျွန်တော်တို့အဖို့ မြန်မာလူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကိုတောင် မကြားဖူးဘူး။ အဲဒီစကားလုံးပိုင်ရှင်တွေ ဘယ်တော့ ပေါ်လာမလဲ ဆိုတာလည်း မသိဘူး။ ဒါတွေရဲ့ မူရင်းလက်သည်တွေကို လိုက်ရှာပြီး အပြစ်ဖို့နေလို့လည်း ဒီသံသရာက ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေကပဲ လက်ရှိအချိန်က စပြီးတော့ ကြိုးစားရပါမယ်။ မိဝေး၊ဖဝေးနဲ့ တိုင်းတပါးမှာ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့ မိမိတို့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက်၊ မိမိတို့က ဖြစ်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေ အတွက် အစွမ်းကုန် လုပ်ပေးကြရပါမယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ အတွက် မျိုးဆက်နှစ်ဆက်၊ သုံးဆက်ရင်းရင် ရမယ်ဆိုတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်၊ သီအိုရီလိုလို စကားတစ်ခု ကြားဖူးပါတယ်။ စကားအဖြစ်ပဲ ရှိတာပါ။ ဘယ်သူမှ မရင်းကြပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ အားလုံးက ပိုနေမြဲ၊ ကြားနေမြဲ၊ ရေသာလိုက်ပြီး နေသာသလိုသာ နေခဲ့ကြတာပါ။ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် စွမ်းစွမ်းတမံဆိုတာ မရှိခဲ့လို့ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ရောက်နေတာပါ။
ဘယ်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ဆီက နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ကျောင်းတွေ။ ဘယ်မှာလဲ အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ သူတွေ။ ဘယ်မှာလဲ နည်းပညာရပ်တွေကို လေ့လာဆည်းပူးဖို့ သုတေသန စင်တာတွေ၊ စမ်းသပ်ခန်းတွေ၊ ထောက်ပံ့မှုတွေ။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ပညာတွေကို တိုင်းတပါးမှာပဲ သွားသင်ယူနိုင်တာပါ။ သင်ယူပြီး ပြန်လာတဲ့ သူတွေကလည်း ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ပြန်အသုံးမချနိုင်တော့ အလဟဿပဲပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီပညာသင် ထွက်ခြင်း သံသရာက မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေကို စာသင်ဖို့ လွတ်ရအုံးမှာပါ။ ပိုက်ဆံတွေလည်း ကုန်အုံးမှာပါ။
ကြည့်အုံးလေ။ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေ၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့။ စပါးစိုက်တဲ့ နေရာမှာတောင် စပါးအခြောက်ခံချွေလှေ့ဖို့ နည်းပညာမရှိလို့ သူများဆီက ယူရသတဲ့။ ငါးမွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံက အကူအညီပေးရသတဲ့။ ပြည်တွင်းမှာ ဓာတ်မြေသြဇာ အလုံအလောက် မထုတ်နိုင်လို့ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှက တင်သွင်းရသတဲ့။ တခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပါပဲ။ ဒီလို အသေးအဖွဲတွေမှာတောင် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဂြိုဟ်တုလွတ်ဖို့၊ အာကာသနည်းပညာတို့ ဆိုရင် ဝေးရော။
ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ တက္ကသိုလ်တွေတောင် စာသင်တဲ့ တက္ကသိုလ်က သပ်သပ်၊ ပရောဂျက်တွေ လုပ်တဲ့ တက္ကသိုလ်က သပ်သပ်ဆိုပြီး ရှိသတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီက လေးနှစ်၊ ငါးနှစ်လောက် အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ ဘာလက်တွေ့မှ မရှိဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တစ်လုံးသာ ရသွားတယ် အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတစ်ခုမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မသိဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဘာသာရပ်တွေကို ဘယ်နားမှာ သွားအသုံးချရမလဲဆိုတာလဲ မသိကြဘူး။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အဲဒီဘွဲ့ကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်စားလို့လည်း မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာ အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ တမျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာပါ။ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းကြံဆပြီး ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါမှ ရေရှည်ကောင်းစားမယ့် အဖြစ်ပါ။ အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်သူရှိမလဲဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ အဓိကဖြစ်တဲ့ အရင်းအမြစ် ဟာ ပညာရေးပါ။ ဟိုးရှေး မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာ ဆိုရင်တော့ ပညာမတတ်လို့၊ နည်းပညာ မရှိလို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးပဲ လယ်ယာလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြလို့၊ ဓား၊လှံကိုင်ပြီး စစ်တိုက်တဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ အားလုံးက သူမသာ ကိုယ်မသာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ပညာဟာ အရေးပါလာပါပြီ။ နည်းပညာခေတ်မှာ နည်းပညာ မရှိရင်တော့ ငမိုက်သားမုဆိုး နင့်ချည်းသာ ခံပေတော့ ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ စပါးတစ်တင်းရဖို့အတွက် အချိန်တွေ၊ လုပ်အားတွေ၊ ချွေးတွေ ရင်းပြီး မစို့မပို့ငွေလေးနဲ့ လူလုပ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ ချပ်စ်ပြားလေးတွေကို ထုတ်ပြီး ဒေါ်လာသန်းချီရနေတာဟာ နည်းပညာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်မျိုးဆက်တွေ အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ပေးကြမလဲ။ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်ကြလဲ။ ဒီအတိုင်းပဲ ထားခဲ့မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အမေရိကန်ကို၊ သို့မဟုတ် ဥရောပတိုက်ကို ရွှေ့ကြမလား။
တစ်ခုခုတော့ လုပ်ကြဖို့သင့်ပြီဆိုတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက် ဉာဏ်လေးနဲ့ မမီ့တမီ စဉ်းစားတင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။ မှားယွင်းနေပါက လမ်းမှန်ကို တည့်မတ်ပေးကြပါ။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးကော်မတီအကြောင်းနဲ့ မဲဆောက်အနီးဝန်းကျင်က ကျောင်းလေးတွေရဲ့ အခြေအနေကို ဒီတပတ် တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကလေးတွေ အတွက် ပညာရေး ကော်မတီကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ကလေးများ ပညာရေး ကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ ဥက္ကဌအဖြစ် မဲဆောက်မှာ ရှိတဲ့ အထက်တန်းကျောင်း တကျောင်းဖြစ်တဲ့ ဆာသူးလေ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူ နော်ဖောရယ်က တာဝန်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကတော့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကလေးတွေအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြားဒေသက ကျောင်းတွေနဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်း တပြေးညီတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွား မယ်။ နောက် အဲဒီကလေးတွေ ရဲ့ ပညာရေးကို ထိုင်းအစိုးရက တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုအောင်၊ အထက်တန်းလွန် ကျောင်းသားတွေ အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကောလိပ် ကိုလည်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်လို့ တရားဝင် ပြောကြားထားပါတယ်။
သူတို့လေးတွေအားလုံး ပညာကို လိုချင်တက်မက်သူလေးတွေပါ
မဲဆောက်မှာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ စာရင်းဇယားအရ (မယ်လမ၊ ဖို့ဖရာ့ စတဲ့ မဲဆောက်အနီးအနားက နယ်တွေအပါအ၀င်) ကျောင်းပေါင်း ၇၅ ကျောင်း၊ ကျောင်းသားပေါင်း ၇၇၇၄ ဦး ၊ ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ ဦးရေ ၃၇၂ ဦးထိ တိုးမြင့် များပြားလာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ များပြားလာတာနဲ့အတူ အချိုးကျ တိုးပွားလာတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးငယ်လေး တွေရဲ့ပညာရေး လိုအပ်ချက်တွေကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ဒီကလေးတွေ ကို ဒီလိုမှ ပညာသင်ကြား မပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ကလေးတွေဟာ မူးယစ်ဆေး ကုန်ကူးမှု တွေမှာ အသုံးချခံရတတ်တယ်၊ နောက်တခါ လူကုန်ကူးမှု၊ ကလေးပြည့်တန်ဆာ အဖြစ်သွတ်သွင်းခံရမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့ အတွက် ပညာရေးကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ရတဲ့ အပြင် အခုဆိုရင် ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများရဲ့ ဆရာများ သမဂ္ဂကိုလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်က အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီကော်မတီတွေက အထောက်အပံ့မရှိတဲ့ ကျောင်းတွေအတွက် အလှုရှင်ရအောင် ၊ နောက် သူနဲ့ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ စေတနာရှင်တွေနဲ့ အတူ စာရင်းသွင်းပြီးသား ကျောင်းလေးတွေ အတွက် တတ်နိုင်သလောက်လစာ၊ ကျောင်းအတွက် အသုံးစရိတ် စသည်ဖြင့် ထောက်ပံ့ရ ပါတယ်။
တချို့ကလေးတွေက မဲဆောက်ရောက်မှ ကျောင်းနေဖူးကြတာတွေပါ
ကလေးတွေ ကျောင်းတက်တဲ့အခါ အိမ်နားနီးကျောင်းမှာ တက်ဖြစ်တာများပေမဲ့ တချို့ ကလေးတွေက အထက်တန်း ကျောင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းကြိုကားခ တတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေ က ကျောင်းနည်းနည်း ကောင်းတဲ့ကျောင်းမှ ထားကြတဲ့အခါ မနက် ၉ နာရီ တက်ရမယ့်ကျောင်း ကို ကျောင်းကားမလုံလောက်လို့ မနက် ၇နာရီ ၁၅ လောက်ကတည်းက ထမင်းဘူးနဲ့ သွားရတာ၊ ကျောင်းဆင်းချိန် ၃ နာရီပေမယ့် ညနေ ၅ နာရီထိ ပို့လိုက် ကြိုလိုက် လုပ်နေတဲ့ ကျောင်းကားကို ကျောင်းမှာ စောင့်နေရတာ စသဖြင့် တော်တော် ဒုက္ခရောက် ကြပါတယ်။
မိဘတွေက အလုပ်သမားလက်မှတ် မရှိကြတဲ့အခါ၊ တချို့ အဖေကရှိ အမေကမရှိ ဖြစ်ကြတာမို့ ထိုင်းရဲတွေ ၊ ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တွေ ဖမ်းနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် ကလေးတွေပါ မိဘနဲ့ အတူ တောထဲ တောင်ထဲ ရှောင်ပုန်းပြေးနေရတော့ ကျောင်းပျက် ကြပြန်ပါရော။ တခါတလေကျပြန်တော့ မဲဆောက်မှာ ကျောင်းနေတဲ့ အရွယ်တွေ ပလပ်စတစ်ကောက်နေတာ၊ အမှိုက်လှည်းလေးတွန်းလို့ လမ်းဘေးက အမှိုက်ပုံးတွေကို မွှနေတာ မြင်ရတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဘာ့ကြောင့် ကျောင်းမတက်ကြတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ပါးစပ်ဖျားကို အမြန်ရောက် ပေမယ့် မမေးမိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရပါတယ်၊ ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့က အခြေအနေတွေ အားလုံးပေးပါမှ ဆိုတဲ့ ဘ၀တွေမဟုတ်လား။
အခုရက်တွေမှာတော့ မဲဆောက်မှာ အလုပ်သမားလက်မှတ်မရှိတဲ့သူတွေကို ပိုက်စိတ်တိုက် ဖမ်းဆီးနေပြီး မိတာနဲ့ ထောင် ၁၂ ရက်ချ ၊ နောက် လွတ်ရက်မှာ တဖက်ကမ်း မြ၀တီကို ပြန်ပို့နဲ့ မို့ လူကြီးတွေ ပြေးနေရသလို ကလေးတွေလည်း လိုက်ပါပြေးနေရတာမို့ တချို့ ကျောင်းသေး သေးလေးတွေတောင် ပိတ်ထားတာရှိပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေတွေအရမှာတော့ နယ်မြေဒေသမှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့ ပဋိပက္ခအပေါ် အခြေတည် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေကို အကြောင်းပြလို့ လုံခြုံရေး အတွက်ဆိုကာ အချို့နယ်မြေတွေက အိမ်တွေကို ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာ၊ ဖျက်သိမ်းခိုင်း တာတွေ လုပ်လာတဲ့အပြင် ဆရာဆရာမလုပ်နေသူတွေကိုလည်း အလုပ်သမား လက်မှတ်မရှိတဲ့ အတွက် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်း တွေ လုပ်လာတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ကျောင်းအချို့ ဆက်မဖွင့်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်သလိုအခြေအနေတွေထဲကပဲ တတ်နိုင်သလောက် အခြေအနေဖြစ်အောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေကြဆဲပါ၊
ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးတွေကို ဆွေးနွေးရင်းအဝေးသင်ပညာရေးထဲက Online Education အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်၊ တကယ်တော့ ပညာရေးမှာ Information Technology ခေတ်ရောက်ပြီလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကိုသာ ကျောင်းပညာရေးအတွက် တကယ် ထိထိရောက်ရောက် အားပေးမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေဟာလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပညာရေးတွေကို ဆည်းပူး ရယူ နိုင်ကြမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနီးဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ IT ထွန်းကားတဲ့အတွက် လူတိုင်း ကိုယ့်အရည်အချင်းရှိသလောက် ပညာကို အလွယ်တကူ သင်ယူခွင့် ရနေတာမို့လို့ ပညာရေးအဆင့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် အများကြီး သာသွားတာပါ။
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ စာသင်ခန်းတွေ ဆီမှာလဲ ထိရောက်တဲ့ပညာရေးကို မရ ၊ Internet ကနေလည်း လေ့လာခွင့်မရတဲ့အခါမှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အားကိုးရာက ကျူရှင်တွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျူရှင်ဆိုတာက ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး တမျိုးလို ဖြစ်လာပြီ လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ ကျူရှင်အကြောင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျူရှင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ၁၉၇၀လောက်ကစပြီး တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ အစပျိုးတာကတော့ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေကပါ။ မိဘနှစ်ပါးလုံး အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာတာနဲ့အတူ ကလေးပညာရေးကို မိဘက အချိန်မပေးနိုင်ကြတော့တဲ့ အတွက် ကလေးတွေကို စာတော်ဖို့ သူတို့ အတန်းပိုင် ဆရာ ဆရာမဆီ အချိန်ပို သင်ဖို့ အပ်ရာကနေ ကျူရှင်တွေ ပေါ်လာတာပါ။ မဆလခေတ်မှာ ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလာပြီး ၀န်ထမ်းတွေ လစာနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မလောက်မငှ ဖြစ်လာရာကနေ အပိုဝင်ငွေရတဲ့ အလုပ်ပိုတွေလုပ်လာကြရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာတွေလည်း ကျူရှင်ပြတဲ့ အပိုအလုပ်ကို လုပ်လာကြရတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဆေးတက္ကသိုလ်တို့ စက်မှုတက္ကသိုလ်တို့လို အမှတ်ကောင်းမှ ၀င်ခွင့်ရတဲ့ ကျောင်းမျိုးဝင်ခွင့် ရဖို့အတွက် ၁၀တန်းစာမေးပွဲ အမှတ်က အဓိက ကျလာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းမှာသင်တာနဲ့ မလုံလောက် တော့ဘူးလို့ ယူဆလာကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျူရှင်တွေ အများကြီး ထွန်းကားလာတာ ပါပဲ။ အစောပိုင်းတုန်းက ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေပဲ ကျူရှင်သင်ရာကနေ နောက်ပိုင်း မှာ ပြင်ပကျူရှင်တွေပါ ရှိလာရာက ၁၉၇၅ခုနှစ်လောက်မှာ အစိုးရက တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ကျူရှင်ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီကျူရှင်တွေဟာ ၁၉၉၀နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၀ိုင်းဆိုပြီးတော့ လူ ၁၀ယောက်သာ အများဆုံး လက်ခံပြီး သင်တန်းကြေးလည်း အများကြီးပေးရတဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းသွားပါတယ်။
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံပညာရေးမှာ ကျောင်းတွင်း သင်ကြားမှု အခြေအနေဟာ တော်တော် ဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ လစာ နည်းပါးမှုကြောင့် ဆရာတွေဟာ စာသင်ခန်းကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်း ဆရာတွေအပေါ် အားမရတာမျိုး အပြန်အလှန် ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ခေတ်စနစ်ရဲ့ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းနဲ့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းရဲ့ ဘာသာရပ်များတဲ့ အခက်အခဲတွေ အင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့ ပြဿနာ တွေကြောင့် မိဘက သားသမီးပညာရေးကို မကူနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကို အချိန်ပြည့် ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ဘော်ဒါတွေ ပေါ်လာပါတယ်၊ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်လောက်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သားသမီးတွေကို ဘော်ဒါကျောင်း ထားတာ ခေတ်စားလာပါတယ်။ ဘော်ဒါကျောင်းတချို့ကတော့ တကယ်ပဲ ကလေးတွေကို ကျောင်းနေ ပျော်ပြီး စာတော်စေတယ် လို့ ကျောင်းသားမိဘတွေက ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ကလေးတွေ ကျောင်းနေပျော်ပြီး စာတော်စေရေးဟာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ ကျောင်းဆရာတွေမှာ အထူး တာဝန်ရှိတာပါ။ အခုတော့ ကလေးတွေက ကျူရှင်တွေမှာ ဘော်ဒါကျောင်းတွေမှာပဲ ပျော်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလို ပျော်ခွင့်ရတာကလည်း တကယ့် လူနည်းစုလေးပါပဲ။ ကျူရှင်တွေ ဘော်ဒါတွေရဲ့ စရိတ်က သိပ်များတာမို့လို့ သာမန် လူထုလူတန်းစားက သားသမီးတွေခမျာ အနားတောင် မကပ်နိုင်ကြပါဘူး။ အခု ၂၀၀၆-၂၀၀ရ ပညာသင်နှစ်အတွက်ဆိုရင် ၀ိုင်းကြေးက ဘာသာစုံ ၁၀ယောက်ဝိုင်း တစ်ဝိုင်းကို အနည်းဆုံး ကျပ်၁၀သိန်း ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်း ကျူရှင်ခက တစ်လကို ၁သိန်းခွဲ လောက်ရှိတာပါ။ ဘော်ဒါတွေကတော့ ကျောင်းသားကို အစားအသောက်ကအစ ကျန်းမာရေး အဆုံးကြည့်ပေးတာမို့လို့ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး ဘော်ဒါကျောင်းကတောင် ၁၂သိန်းပေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလောက် ငွေကြေး အကုန်အကျ များတဲ့ ပညာရေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူနည်းစုသာ တတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး သားသမီးလည်း နည်းတဲ့သူတွေသာ တတ်နိုင်တာပါ။
သာမန်ဝန်ထမ်းသားသမီးလို ကျူရှင်အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျမခံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ အများစုတက်နိုင်တဲ့ တန်းခွဲကျူရှင်တွေမှာ တက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ ကျူရှင်တွေမှာတောင် မှ သင်တန်းကြေးက အနည်းဆုံး တစ်ယောက်ကို တစ်လ ၆သောင်းရှိပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး ၆သိန်း ၇သိန်းတော့ ကုန်မှာပါ။ အဲဒီလောက် အကုန်အကျခံထားရတဲ့ ပညာရေးရဲ့ ဦးတည်ချက်ကရော တကယ်တန်ဖိုးရှိရဲ့လား၊ တကယ်ရော အသုံးကျရဲ့လားဆိုတာကလည်း စဉ်းစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ခုနှစ် မေလမှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက ကျောင်းဆရာဆရာမတွေ ကျူရှင် မပြရဘူး၊ပြရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတချို့ကိုလဲ စစ်ဆေးပြီး ပိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး အတွက် တကယ်လည်း လိုအပ်နေတဲ့ ကျူရှင် ယဉ်ကျေးမှု ကတော့ ရှိနေရတုန်းပါပဲ။ ပိုဆိုးတာကတော့ ခုချိန်မှာ ကျူရှင်ဆိုတာက တက္ကသိုလ်အဆင့်၊ မဟာဘွဲ့အဆင့်တွေထိပါ ရှိနေတာပါပဲ။
တကယ်တော့ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းမတက်ဘဲ ကျူရှင်တွေပဲ တက်နေလို့ ကျူရှင်တွေ ပိတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာထက် ကျောင်းမှာ စာကို ဂရုတစိုက်သင်ပေးဖို့နဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ စားဝတ်နေရေး မပူပင်ရဘဲ စာကောင်းကောင်း သင်ပေးနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးဖို့ကသာ အစိုးရတွေရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အဓိကတာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအက်ဆေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးပတ်က ကျွန်မအလုပ်က စီအိုအို မစ္စတာ ဘရင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဒါရိုက်တာ မစ္စဒိုင်ယာနာကင်းနဲ့၊ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ ယူနီဗာစီတီက Clinical ပရိုဖက်ဆာ ဦးမင်းကြည်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၏ အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်တွေကို အက်ဆေးအဖြစ် ကျွန်မပြန်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မရေးထားတဲ့မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောင်မှ မြန်မာဘာသာနှင့် ပြန်လည်ရေးသားမည်ဟု စဉ်းစားထားပါသည်ရှင်။
Persons who rule, guide or inspire others are often perceived as leaders. Throughout the years, people have attempted to define “leader” and “leadership” in many ways. Some believe that leaders are born, not made, while others believe that leaders can be made through proper training and the acquisition of emotional intelligence – self-regulation, motivation, empathy, and social skills. I also used to consider only certain people with very high profiles, like Martin Luther King, Gandhi, Mother Theresa and Daw Aung San Su Kyi, to be leaders. However, I have come to realize that even ordinary people lead themselves and others in many ways. As Whyte states, our life’s work is notaseries of stepping-stones onto which we calmly place our feet, but more like and ocean crossing where there is no path. He also states that there will be times when our leaders and captains cannot be relied on. I believe that from time to time, even when we have been assigned the role of followers, we all have to find our own paths or awaken our inner captaincy to take charge when our leaders have failed to lead.
When I interviewed three individuals whom I considered leaders, I chose subjects of both genders, of different ages, and with varied work experience. I assumed that their views on leadership and leadership styles might have been influenced by their gender, personal experiences, education and training, and organizational culture. I expected to learn about their views on leadership and management, as well as their definitions of leadership. I also wanted to find out how they nurtured leadership in their employees or co-workers, and how they would handleasituation in which the organization’s goal conflicted with their own moral values. I also wanted to know if they thought of themselves as leaders. The first person I interviewed was Bob Breen, the Chief Operations Officer of MDS Metro Diagnostic Services, who spent twenty years in the military before he joined MDS Metro. My second subject was Mr. Min Trevor Kyi,aclinical assistant professor in the University of British Columbia’s Faculty of Medicine (School of Rehab Science), and the third leader was Diana King,adirector of Communications and Public Relations from MDS Metro Diagnostic Services. I chose these interviewees because all of them are dedicated and highly motivated persons with at least 15 years of leadership experience. I also believe that they have strong organizational and communication skills for building partnerships among co-workers and communities.
In the interview, Mr. Breen said that the training he received in the military was mostly about leadership; therefore, this training helped him lead MDS Metro. He defined leadership as an ability to take the goals of an organization and create an environment that makes all of the people in the organization want to achieve the goals. He also stated that he would createasense of real ownership of the goal among followers and would stand up front to point out to them that the goal was worth going for. However, he doesn’t believe that pushing people towards the goal isagood leadership skill.
Mr. Kyi defines leadership the ability to make hard decisions and yet be liked by subordinates. He believes thataleader should be able to make the right decision. He was torn when asked what he would do if the organization’s goal conflicted with his moral values. He said that he would try to see the bigger purpose and consider the greater good if he had to make the decision. I think that Mr. Kyi’s leadership style is leaning towards charismatic leadership, as he seems to gather followers through dint of personality and charm, rather than through any form of external power or authority.
In contrast, in case of an ethical conflict, Ms. King said that she would do everything in her power to influence the organization and make sure the organization knew what it was asking her to do and how she was conflicted. Finally, if she could not findacompromise that she could live with, she would leave the organization because that kind of organization would not be one for her to work for. Her leadership style reminds me of the way Johns-Manville handled the asbestos catastrophe. Bill Sells,amanager of Manville for more than 30 years, became aware that his company had been producing deadly chemicals and explosives forahundred years. When he raised objections, he was criticized by his boss for not being loyal to the organization. However, he convinced his boss that he was the one who was loyal and started to take action by launchingahalf-million-dollar program to replace or rebuild nearly all the safety equipment in the building.
Takingavery different stance, Mr. Breen said that he would just quit the organization if an ethical conflict arose. He said that he did not have to adjust his values to be in an organization. In addition, he did not mention in the interview that he would make any attempt to make the organization understand why there was an issue for him. I concluded that asaresult of being trained in the military, his leadership style is more transactional, based on an assumption that social systems work best withaclear chain of command. He also mentioned in the interview that he would clearly lay out each goal with the plan and possible outcome for his followers. He gave an example of being onabattlefield whereasoldier can be shot and killed if things go wrong. As well, inaswinging trapeze example, he pointed out that one would grab another trapeze in order to makeanew step. I believe that one could fall and make another attempt. However, there are so many cases in which people do not have another chance, and that could be worse than the void between the swings. Therefore, in the above situation, asamilitary officer Mr. Breen must have needed to recognize possible negative outcomes, and to try to useatransactional leadership style.
All my interviewees expressed the belief that formal and informal training and mentoring, along with giving employees new projects and chances to make mistakes, learn, and grow, could help in nurturing subordinates; however, Ms. King believes that it not up to the mentor to force someone to consider him/her asamentor. She believesagood leader is someone who does not use the word “I” and who hasasense of humour. Similarly, Mr. Kyi stated that selflessness, empathy, active imagination, sharing the workload and trusting the employees are some good leadership qualities. In addition, Ms. King stated that giving acknowledgment and recognition to employees who are leading without authority is one of the qualities ofagood leader. She asserted that it does not matter, or at least should not matter, whether the leader gets the recognition or the team gets the recognition. This concept reminds me of Heifetz’s suggestion to find partners: the ally and confidant. I believe that finding partners, getting input and contributions from one’s followers and selecting their best ideas, input and contributions, can be helpful in accomplishing the common goal.
As stated above, some believe that leaders are born, not made, while others believe that leaders can be made by offering proper training to bring out emotional intelligence. I believe that leaders can be made; however, some traits such as an out-going personality and enthusiasm need time, practice andagreat force to evolve if they are not already present. My belief is supported by Daniel Goleman. In his paper “What Makes A Leader?”, he states that there isagenetic component to emotional intelligence which means that nature playsarole in determining whetheraperson will beagreat leader. The advice that I received from my colleagues and friends when they were sharing their life experiences with me included encouragement to empathize, forgive, take chances, be happy, give recognition, never give up, give another chance, and have courage. This advice is similar to Warren Bennis’s manager vs. leader distinction, which states that leaders focus on people, inspire trust, have an eye on the horizon, innovate,investigate, challenge and develop new plans. I have also mentioned that I used to consider only famous individuals to be leaders. However, after readingafew books about leadership, watching presentations, listening to the speakers, interviewing some leaders, and watching my friends and co-workers, I have come to the understanding that leaders can be just ordinary people who makeadifference in their communities and in the world. I have come to realize that even the smallest thing that we do in our lives with good intentions can constitute leadership and haveapositive effect on someone somehow. Therefore, even though one does not have all the skills ofagreat leader, one can learn the skills by havingamentor, taking on new challenges, making mistakes and learning from them, and developing spirituality and emotional intelligence.
Goleman, D. ‘What Makes A Leader’
Teal, T. The Human Side Of Management
Whyte David. “Crossing the Unknown Sea”
ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို Federal Government က ချုပ်ကိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်နယ် အစိုးရတွေက ပြည်နယ်အလိုက် တာဝန်ယူကြပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို သူငယ်တန်း၊ မူကြိုအရွယ်မှာပဲ စပြီး မိဘနဲ့ ဆရာသမားတွေက ကြပ်မတ်တာ မဟုတ်၊ မွေးကင်းစအရွယ်က စပြီး ကလေးတွေကို အစားအသောက်၊ ကျမ်းမာရေးကအစ သိပ်ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ တစ်နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ် အရွယ်က စပြီး ရေမြှုပ်လိုပဲ အကုန် စုပ်ယူမှတ်ထားတယ်လို့ သုတေသနတွေအရ သိရလို့ အဲဒီအရွယ်က စပြီး ကြပ်မတ်ကြတယ်။ စာရေး၊ စာဖတ်၊ အတွက်အချက်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေဟာ သူငယ်တန်းမှာမှ စတင်သင်ယူ လေ့လာရရှိကြတာမဟုတ်တာ အားလုံးလဲ သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ကလေး မယူကြသူတွေရှိသလို၊ ကလေးယူတယ်ဆိုရင်လဲ ကလေးတွေအတွက် ဘ၀ကို မြုပ်နှံလို့ မိဘကောင်းတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားသူများကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ မနက်လေးနာရီထပြီး သူတို့ကလေးတွေကို သင်တန်းမျိုးစုံကို ပို့ပေးပါတယ်။ အားလုံးသိကြပြီးတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီမှာက ထမင်းချက်လဲကိုယ်၊ ကားမောင်းလဲကိုယ်၊ ခြံစိုက်လဲကိုယ်၊ အ၀တ်လျှော်လဲကိုယ်၊ အားလုံးသိမ်းကြုံးလုပ်ကြရတာဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများလို ကလေးကျောင်းကြို၊ ကျောင်းပို့ လူစားမရှိတော့ သူတို့တွေပဲ မနက် လေး၊ငါးနာရီထ၊ ထမင်းဗူးထည့်၊ ကလေးပစ္စည်းထုပ်ပိုး ထွက်ကြတာတွေ့နေရပါတယ်။
ကလေးတွေကို အသက်၁၈ နှစ်ပြည့်တာနဲ့ မိဘအိမ်က နှင်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ အနောက်နိုင်ငံက မိဘများကို ဝေဖန်ခြင်းခံရတာတွေကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မမြင်တာကတော့ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားသေတော့မဟုတ်ပါ။ မိသားစု တစ်စုစီအပေါ်မှာ မူတည်တယ်၊ အခြေအနေတွေ၊ အချိန်ကာလတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေ ၁၈နှစ်ချိန်မှာ ဘ၀တစ်ခုထူထောင်နိုင်အောင် မိမိခြေထောက်ပေါ်မှာ ရပ်နိုင်အောင် တောက်လျောက် သင်ကြားပေးပြီးခဲ့ပါပြီ၊ သွန်သင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ပင်လယ်ထဲမှာ ကျက်စားနေတဲ့ ငါးမန်းတွေ၊ တိုက်ငါးတွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်အောင် သူတို့ငါးတွေကို ၁ဂနှစ်တိတိ ကျင့်ပေးပြီးခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ဟာ တစ်ကယ်တော့ အလှမွေးကန်ထဲက ငါးတွေမဟုတ်ပါ။ ဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက် လွှတ်ပေးခဲ့လို့လဲ ကျရှုံးသွားတဲ့ ငါးပေါင်းကလဲ နဲမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်သွားတော့လဲ အဆုံးစွန်ပါပဲ။ ကလေးတွေဟာ ၂နှစ်ခွဲ၊ ၃နှစ်လောက်မှာကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထမင်း၊ဟင်း ကောင်းကောင်းစားတတ်နေပါပြီ။ လေးနှစ်လောက်မှာကို မိမိဘာသာဂျာကင်ဝတ်၊ ဖိနပ်စီးတတ်နေပါပြီ။ ကျွန်မ ၁၈နှစ်တုန်းက မိမိခြေပေါ်ရပ်တည်နိုင်မှုနဲ့ ဒီနိုင်ငံက ၁ဂနှစ်တွေ မိမိခြေပေါ်ရပ်တည်နိုင်မှု။ ရင့်ကျက်နေမှု၊ လှုမှုဆက်ဆံရေးတွေဟာ ကွာခြားလွန်းပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ ပညာရေးနဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် ကျမကိုယ်တွေ့လေး အနည်းငယ်ဝေမျှလိုပါတယ်။
ကျွန်မအိမ်ရှေ့က အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီး လင်မယားဆိုရင် အဘွားကြီးနေမကောင်းစဉ်က သမီးဖြစ်သူက ကလေးတွေကို ယောင်္ကျားဖြစ်သူနဲ့ ထားပြီး လနဲ့ချီလို့ လာစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလုပ်သူကလဲ မိန်းမ သူ့မိဘနာမကျမ်းစဉ် ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကလေးတွေကို သူကိုယ်တိုင် စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ တစ်ပတ် ၂ခါ ကလေးတွေနဲ့အတူ မိန်းမ ခေတ္တနေနေတဲ့ သူ့ယောက်ခမတွေအိမ်ကို လာလည်ပါတယ်။ (ဒီတိုင်းပြည်မှာ တော်ရုံလူတွေတောင် ကလေးထိန်း၊ ထမင်းချက် မငှားနိုင်ကြပါ၊ ဒီယောင်္ကျား ဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်) ဒီလိုမိဘကိုကြည့်နိုင်အောင်လဲ Employment Insurance ကိုလျောက်လို့ရပါတယ်။ အစိုးရက နာမကျမ်းဖြစ်သူ မိဘကို လစာနှင့် တစ်နှစ်တိတိကြည့်ခွင့် လျှောက်နိုင်အောင်လဲ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ထားပေးပါတယ်။ အချို့သောလူအိုရုံဆိုရင် လူကြီးတစ်ယောက်ကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၂ထောင်မှ ၃ထောင် ကျပါတယ်။ ခမ်းနားတဲ့ထမင်းစားဆောင်တွေ၊ သန့်ပြန့်တဲ့အခန်းတွေ၊ သူတို့အရွယ် လူတွေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုပါပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေကတော့ ပိုသိမှာပါ။ အိုခြင်း၊ နာခြင်းက အနောက်နိုင်ငံတင်သာမက ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်တော့ မကောင်းလှပေမယ့် ကြုံကြိုက်နေရစဉ်တော့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပဲ။ မိမိအိမ်မှာ နာမကျမ်းဖြစ်နေလဲ သားသမီးတွေက မကြည့်ပဲ ပစ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနိုင်ငံတွေမှာ နာမကျမ်းသူ မိဘတွေကို မကြည့်ပဲ ပစ်ထားတယ်၊ ကလေးတွေကို ၁ဂနှစ်ပြည့်တာနဲ့ နှင်ချတယ်၊ သူတို့ မိသားစုတွေ မစည်းလုံးဘူး ဆိုတာတွေက အခြေအနေတစ်ခုခြင်းဆီ ပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်)
ဒီနိုင်ငံက ကလေးတွေ မူကြို၊ မူလတန်းကျောင်းမသွားချင်လို့ ငိုနေတာ၊ အော်ဟစ်ကန်ကြောက်နေတာ ကျွန်မတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ကျောင်းမသွားရလို့ ငိုတာတို့၊ ကျောင်းတက်ချင်လို့ နေမြန်မြန်ကောင်းချင်တာတို့ပဲ ကြားဖူးတယ်။ မူကြိုကလေးလေးတွေဟာ စာရေး၊ စာဖတ်၊ ပုံဆွဲ၊ ကွန်ပြူတာ စသဖြင့် တစ်နေ့နှစ်နာရီလောက် သင်ယူကြပါတယ်။ တချို့ကလဲ တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက် သို့မဟုတ် လေးရက်၊ တစ်နေ့ နှစ်နာရီ သင်ယူကြတယ်။ ကစားနည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျောင်းမှာ ပျော်တတ်အောင်၊ ကျောင်းဆိုတာ ပျော်စရာဆိုတာကို အရင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ Lower-middle class တွေနဲ့ အချို့ working class က မိဘတွေကအစ၊ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေဟာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာကို ရေကူး၊ ဘောလုံး၊ ဟော်ကီ၊ ဘဲလေး၊ ကျွမ်းဘား စသည့် ကျမ်းမာရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ဥာဏ်ရေဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ကစားနည်းတွေ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ထိတွေ့၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပါပြီ။ ကျွန်မ သိရသလောက်ကတော့ သူငယ်တန်းကိုလဲ နေ့တစ်ဝက်ပဲတက်ရပါတယ်။ မနက်ပိုင်းအချိန် သို့မဟုတ် ညနေပိုင်း နှစ်ချိန်ခွဲထားတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်တာမဆိုနဲ့ အော်၊ငေါက်ခြင်း၊ ဆူပူခြင်း စသဖြင့် လုံးဝမလုပ်ကြပါ။ ဆိုးတဲ့ ကလေးတွေကို အတန်းဒေါင့်မှာ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းခြင်း၊ တစ်ယောက်ထဲ ကစားခိုင်းခြင်းနဲ့ ဒဏ်ပေးတတ်ကြတယ်။ ကလေးတွေကို စာမရလို့ လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ခွဲခြင်း၊ ဆူပူငေါက်ငမ်းခြင်းတွေ မလုပ်သလို၊ လုပ်ခွင့်လဲ မရှိပါဘူး။ ငယ်စဉ်အခါက ကလေးတစ်ယောက်ကို လူပုံအလယ်မှ အရှက်ခွဲမိရင် ရှက်သွားတဲ့ အားငယ်သွားတဲ့ ဒေါသထွက်သွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုက (ကလေးက နုတော့) အသက်ကြီးသည်ထိ ပါသွားတယ်ဆိုလို့ ပညာပေးသူ (educator) တွေနဲ့ ကလေးမိဘတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးတွက် အဲလို စိတ်ထိခိုက်အောင် လုပ်မိခြင်းကို ကြိုးစားရှောင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနိုင်ငံက ကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာတွေဟာ အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဖိနှိပ်ခံရမှု၊ နေရင်းထိုင်ရင်း တစုံတရာကို ကြောက်နေရမှု၊ မလိုအပ်ပဲ လေးနက်နေမှု၊ နေရင်းထိုင်ရင်း ရှက်နေမှု၊ မိဘဆရာသမားတွေကိုလဲ လိုအပ်သည်ထက် ရိုသေကြောက်ရွံ့နေမှု၊ နာခံနေမှု အရိပ်တွေကို မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။
အဲလို စိတ်အားငယ်တဲ့ အရိပ်တွေဟာ ကျောင်းထဲ၊ အလုပ်ခွင်တွေထဲအထိ ပါလာတတ်ပါတယ်။
သင်ပညာတွေ ဘယ်လောက်တတ်တတ်၊ ခံယူချက်၊ စိတ်ခံစားချက်၊ အတွေးအခေါ်တွေက ပြောင်းရ သိပ်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ပြောလေ့ရှိတာ၊ လူသစ်တွေကို အလုပ်ကိုမတတ်ရင် သင်ပေးနိုင်တယ်၊ ခံယူချက်၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ သဘောထားက သင်ပေးရမလွယ်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အလုပ်ခန့်တဲ့အခါတွေမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ငှာနက အလုပ်ခန့်ရန် မေးမြန်းသူများက အလုပ်လာလျောက်သူများကို စကား တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောတာနဲ့ attitude ကို ခန့်မှန်းလို့ရနေပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
စစ်အစိုးရကတော့ သူ့ လက်ထက်မှာ ‘စက်မှု စိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေး ပညာဦးစီးဌါန’ ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ အတတ်ပညာ နယ်လှည့် သင်ကြားရေး အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး သင်တန်းတွေ အများအပြား ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးညွန့်က သူ့ရဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်မှာ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးအနေနဲ့ သင်ကြားပေးတဲ့ သင်တန်း တွေကတော့ အချုပ်အလုပ်သင်တန်း၊ အချက်အပြုတ်သင်တန်း၊ ပရိဘောဂသင်တန်း၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ် ပစ္စည်းပြင် သင်တန်း၊ စက်ပစ္စည်းပြင်သင်တန်း၊ လက်သမားသင်တန်း၊ ပန်းရံသင်တန်းနဲ့ ဆံသသင်တန်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ထည့်သွင်း ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့ လက်ချိုးရေလို့ ရတဲ့ အရေအတွက် လောက်ပဲ သင်တန်းတက်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ ပြည်သူတရပ်လုံး ရနိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေ ဖြစ်မလာပါဘူး။
အရင်ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးဟာ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး (Non-formal Education)ဆန်ပါတယ်။ အခုတော့ ချို့တဲ့ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေ ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးက ပုံမှန် ကျောင်းပညာရေး (Formal Education) ဖြစ်လာပါပြီ။ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း ထောင်ကျော် ရှိနေပါပြီ။ စာသင်သားတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သင်ရိုးတွေကို အဆင့်မီ စနစ်ကျတဲ့အပြင် လွတ်လပ်တဲ့ သင်ကြားနည်းကို သုံးပြီး သင်ပေးနေတာမို့လို့ အောင်မြင်တဲ့ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခုချိန်မှာ ပညာလိုလားတဲ့လူငယ်တွေအတွက် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး ကို သင်တန်းပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ သင်ယူနိုင်ကြဖို့.. အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိက စေတနာရှင်တွေ အားလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ပြီး ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးမှု ကူညီပေးမှုတွေနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်သွားကြဖို့ လိုပါတယ်။----
“ငယ်ရွယ် နုနယ်သေးတဲ့ ကလေးဘ၀မှာ စာမေးပွဲစနစ်ကြောင့် အတန်းကျတဲ့အတွက် အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရ စေတာ မျိုးဟာ ကလေးတွေအတွက် မှားယွင်းတယ်” လို့ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး သုတေသီ တွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ အမှားကို တားဆီးဖို့ ကလေးတွေကို စာမေးပွဲစနစ် မသုံးသင့်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ စာမေးပွဲစနစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျုိးတွေကတော့ ကလေးတွေဟာ ပညာရေးမှာ ဆင်ခြင် တွေးတောဥာဏ်ကို မသုံးတော့ဘဲ အလွတ်ကျက် နည်းကို အားကိုးလာပါတယ်။ ပြီးတော့ စာမေးပွဲကျမှာကို ကြောက်တာကြောင့် ခိုးချတာတို့ ဆရာဆရာမတွေကို လာဘ်ထိုးတာတို့ ရှိလာတာပါပဲ။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ဆရာဆရာမ တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး အကျပ်အတည်းကြောင့်လဲ စာမေးပွဲစနစ်ထဲမှာ အဂတိ လိုက်စား တဲ့ အကျင့်ပျက်မှုက ပူးတွဲပါလာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကလေးတွေနဲ့ မိဘတွေအတွက် တော့ စာမေးပွဲဟာ စိုးရိမ်ပူပန်ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။
တကယ်တော့ ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးဘ၀ဟာ ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးကို စပြီး ထိတွေ့ရတဲ့ မူလတန်းအဆင့်ဟာ ကလေးတွေကို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ လိုတာ မို့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထား၊ လူမှုဆက်ဆံရေး အတွေးအခေါ် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ နဲ့ အတူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်အောင် စီစဉ်ပေးရမှာပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေမှာ ကလေး တွေ အတွက် ပညာအရည်အချင်း စစ်ဖို့ကို စာမေးပွဲစနစ် အစား စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးနည်းကို ကျင့်သုံး ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လည်း စာမေးပွဲစနစ်နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးနည်းရဲ့ ရလဒ်တွေက သိသိ သာသာပဲ ကွာခြားပါတယ်။ စာမေးပွဲစနစ်ဟာ ကလေးတွေကို မှတ်ဥာဏ်အား ကောင်းဖို့သာ လိုတယ်လို့ ပုံသွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ရဲ့ တီထွင်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် တွေရဲ့ အရေးကြီးမှုကိုတော့ ထည့်မစဉ်းစားပါဘူး။ အဲသလိုပဲ ကလေးတွေ ရဲ့ ကျန်းမာ သန်စွမ်းတာ ၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းတာ၊ မိသားစုစိတ်ဓါတ် ရှိတာ တို့လို စိတ်ခံစားမှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုပါဘူး။ ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့်တော့ ပညာရေးကဏ္ဍထဲမှာ သိပ်လိုအပ်တဲ့ Moral Education ပိုင်းကို ထည့်မစဉ်းစားတာပါပဲ။
စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးနည်း Continuously Assessment Progression System ကတော့ စာမေးပွဲစနစ်ကို လုံးလုံး ဆန့်ကျင် ပါတယ်။ စာမေးပွဲစနစ်ထဲမှာ စာအများကြီးကျက်ပြီး အများကြီးဖြေရတဲ့နေရာမှာ CAPS ကတော့ တဆစ်စီ တပိုင်းစီပဲ ဖြေကြရပါတယ်။ မေးခွန်းတို ဓမ္မဓိဌာန်ပုံစံနဲ့ သွားတာမို့ ကလေးတွေဟာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖြေဆိုနိုင်ပြီးတော့ တကယ် သိမှ တတ်မှ ဖြေလို့ရတာမို့ စာ တကယ်တတ်ပြီး အတန်း တက်ကြရတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ တီထွင်ဥာဏ် ဆင်ခြင်ဥာဏ် သုံးရတာတွေ၊ ကျောင်းတွင်း အသင်းအဖွဲ့အလိုက် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်း သဘော လုပ် ကြရတာတွေကိုပါ အမှတ်ပေးတာမို့ ကလေးရဲ့ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားပေးနိုင်တဲ့ အတန်း တင် စနစ်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဘက်လိုက်မှုကင်းပြီး တရားမျှတ ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
CAPS အရဆိုရင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ ပိုင်နိုင် ကျွမ်းကျင်ဖို့ သာမကဘဲနဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ လုံ့လ၀ီရီယရှိမှု၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စည်းကမ်းရှိမှု၊ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည် ရှိမှုတွေကို အမှတ်ပေးရပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေ တတ်တဲ့အဆင့်ကိုလဲ မှတ်မိရုံသာမကဘဲ တီထွင် ကြံဆတတ်တာ၊ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတတ်တာ၊ ဝေဖန် သုံးသပ်တတ်တာတွေကိုပါ အမှတ် ပေး ရပါတယ်။ အဲဒီ အရည်အချင်းတွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် လစဉ် မှတ်တမ်းတင် သွားပြီး စာသင်နှစ် အကုန် အခန်းဆုံး စစ်ဆေးအပြီးမှာ စနစ်တကျ အတန်းတင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်းအဆင့်တွေမှာ ကလေးရဲ့ အသက် အရွယ် နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအပေါ် မူတည်ပြီး အကဲဖြတ် အမှတ် ပေး သွားရတာပါ။
မူလတန်းအောက်ဆင့်မှာ ဘာသာစကားတတ်မြောက်မှုနဲ့ အခြေခံသင်္ချာ တတ်ရုံလောက်ပဲ လိုပေမဲ့ မူလတန်း အထက်ဆင့်ကနေ စပြီး အလယ်တန်း အထိ လောက်မှာတော့ တစ်နှစ်ကို ငါးကြိမ်လောက် အကဲဖြတ် စစ်ဆေးရ ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တာ၊ ပြစ်ဒဏ်ကင်းပြီး ကျောင်းစည်းကမ်း လိုက်နာတာ၊ ကျောင်းတွင်း ဝေယျာဝစ္စတွေကို ၀င်လုပ်တာ၊ အားကစား လုပ်တာ၊ စာပေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ် တာ၊ ကျောင်း အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ပူးပေါင်း လှုပ်ရှားတာတွေကိုပါ ထည့်ပြီး အမှတ်ပေး ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ CAPS ဟာ ကလေးတွေရဲ့ စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာတွေ လူမှုဆက်ဆံရေးအသိပညာတွေ တိုးပွား စေတဲ့ စနစ်လို့ ပြောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ ၁၉၉၈-၉၉ကနေ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ပညာသင်နှစ်အထိသုံးခဲ့တဲ့ CAPS မှာ ကလေးတွေအတွက် အစိုးရလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းဝင်ရင် ၁၆မှတ် ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာ ဆရာမနဲ့ အဆင်ပြေရင် ပြေသလို ရသွားတဲ့ အမှတ်တွေလည်း ရှိတာမို့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အောင်မှတ် ၄၀ရဖို့ဆိုတာ မခက်လှပါဘူး။ ဒါတောင်မှ အောင်မှတ် မပြည့်ခဲ့ရင်လည်း ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက အောင်ချက်နှုန်း ကောင်းရမယ်လို့ တရားဝင် အမိန့်ထုတ် ထားတာ မို့လို့ အဲဒီကလေးက ဖြည့်ဆည်းသင်ကြားနည်းတို့ ကုစားစစ်ဆေးနည်းတို့နဲ့ အတန်းတက် သွားတာပါပဲ။ အဲဒီမှာ ပြဿနာကတော့ အောင်ချက် ရာနှုန်း ပြည့်ရမယ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ကြောင့် ဆရာ ဆရာမတွေက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို အလွယ်တကူ အအောင်ပေး လိုက်ကြရတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကလေးတချို့ ဟာ စာတကယ်မတတ်ဘဲ အတန်းတက်သွားကြပြီး စာမေးပွဲစနစ်သုံးတဲ့ အလယ်တန်း အထက်ဆင့် အရောက် မှာ အတန်းကျကြ ရပါတော့တယ်။ တခါတလေမှာ ကျောင်းစာကို ဘယ်လိုမှ မလိုက်နိုင်တော့လို့ ကျောင်းထွက် သွားကြရတာမျိုးတောင် ရှိလာတဲ့ အထိပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ ပညာရေးဝန်ကြီး က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံပညာရေး မှာ CAPS က မအောင်မြင်တဲ့အတွက် စာမေးပွဲစနစ်ကိုပဲ ပြန်သုံးရမယ်လို့ ပြောခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ စဉ်ဆက် မပြတ် အကဲခတ် အတန်းတင် စနစ်ကိုသာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖြစ် ကျင့်သုံး သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း အောင်မြင်နေ တဲ့ စနစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရသလဲ ဆိုတာကို အဖြေရှာကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
CAPS ဟာ ကလေးတွေကို တဦးချင်း အရည်အသွေး ပြည့်မီစေတဲ့ စနစ်ပါ။ ကလေးတစ်ဦးချင်းကို စောင့်ကြည့် အကဲခတ် ရတာမို့ ဆရာဆရာမတွေ တကယ် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ပင်ပန်းတဲ့ စနစ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများရဲ့ စာသင်ခန်းတွေမှာ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကို ကျောင်းသားကျောင်းသူ အယောက် အစိတ် သုံးဆယ်ထက် ပိုမထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ စာသင်သား ဦးရေနဲ့ ဆရာဦးရေ မျှတာမို့ ကလေးတွေ ကို တစ်ဦးချင်း စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ် နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာ ဆရာမဟာ လုံလောက်တဲ့ လစာကို ရကြတာမို့ စားဝတ်နေရေး ပူပန်စရာမလိုဘဲ အလုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ အဂတိ လိုက်စားရတာမျိုးလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက် လိုအပ်ချက် တစ်ခုကတော့ နိုင်ငံတကာမှာက ဆရာအလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဆင်းပြီးသူသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲလို ပညာရေးစနစ်ထဲမှာ အရည်အချင်း ပြည့်မီတဲ့သူတွေမို့ ကလေးပညာရေးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ် နိုင်ကြ တာ ပါပဲ။ ဒီအချက်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ တွေမှာ ပညာရေးစနစ် အောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပါပဲ။
အဲဒီ နိုင်ငံတကာမှာ ပညာရေးစနစ် အောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး အခြေနေတွေအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်တွေကို တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ကလေး တွေအနေနဲ့ မြန်မြန်ကြီး တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို လိုက်မီနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ စာမေးပွဲစနစ် ဟာ ကလေးတွေအတွက် ပုံသေ မှတ်ထားဖို့ကိုသာ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ၊ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ်ကို အားမပေးတဲ့ အဖျက်အဆီး အဆိပ်အတောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေငြိမ်း ( ၅၊၆၊၀၆ )